Waa wax badan u fududahay in ay si fudud guji xoogaa fursado ah oo u noqon inaad kala soo baxdo liiska naga awood jecel videos . Waa hubaal habka aad u sahlan kuwa lagu sameynayo in muddo ah, laakiin kuwa aan lahayn, waxa ay noqon karaan kuwo laga cabsado. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa in wax tar leh in uu akhriyo soo socda oo aad madaxa aad ka bariyeelay ka hor isku dayga dajinta aad.
Fahamka Streaming & dajinta
Sidee-to Download Streaming Videos
Ma awoodo in uu Download?
Internet : Poor, dhexdhexaad ah ama xoog leh
Degsado qalab / software : Range of qaab file aqbasho taageeray
Qaab file Video : Qaabka ay taageerayaan iyo codec loo isticmaalo in uu kaydiyo video ah
Size File : boos Kaydinta iyo RAM loo baahan yahay waa weyn, gaar ahaan uncompressed ama ceeriin files warbaahinta
Nooca video : Streaming ama Non-geeyo
Nooca website server : Streaming ama Non-geeyo
Tusaalooyinka aan hoorto qaab video yihiin waxyaabaha inta badan uncompressed qaabab kaydinta dhaqanka ama caadiga ah sida regelingen ah, WMA, AVI, MKV iyo Mpg. Dhinaca kale, tusaalooyin hoorto qaab video jira qaabab cusub oo dheeraad ah oo caadi ahaan loo isticmaalo sida FLV ah, MP4 iyo MOV.
Wareer ku hareeraysan dheer "geeyo" iyo "soo degsado" karaa mid aad u dhib badan, laakiin waxaa la fahamsan yahay fiican karaa marka laga eego haore sida soo socota:
Streaming vs dajinta
Streaming loola jeedaa in daawashada cajaladaha ku nool ama ku-waqtiga dhabta ah Internetka.
Waa wax caadi ah in ay aragto qaar ka mid ah "naqdida", dhibaatooyin ama joojis intii lagu geeyo.
The "il" fal sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu qeexo tallaabo ee la wadaago files warbaahinta ka mid qalab kale oo ay helaan shabakad isku mid ah.
Streaming video ah macnaheedu ma aha in file warbaahinta ayaa lagala soo bixi (badbaadiyey ama ku kaydsan) rogtid oo aad PC, drive ama qalab.
Streaming kaliya lagu samayn karaa online for daawashada video online ah ama ka weyn Wi-Fi in tusaale ahaan ka mid ah hoorto file video ah oo ku saabsan qalabka telefoonada gacanta si ay TV iyo qeybsanaan.
Video ah halka uu hoorto kale oo suuragal ah, taas oo ay inta badan ku xidhan tahay nooca website server.
Videos soo bixi noqon kartaa loo maqli karo xitaa offline, iyada oo aan internet-ka iyo sidoo kale si fiican u habboon loogu madadaalada on go ah.
Windows XP ama faylasha DRM-ilaaliyo oo aan la soo bixi karaa, iyadoo aan loo eegin video ama website ee nooca server.
Soo bixi video la saxar karo iyo badaley la isticmaalayo qalab ku haboon ama software.
Radidiyaha ee lagala soo bixi videos waxaa ka maqnaan doona arrimaha naqdida.
Sida kor ku xusan, waxaa ay u muuqataa in ay noqon arrin caqabado qaar ka mid ah si aad u hesho ka hor mid ka mid sahlan ama straightforwardly, waxaa laga soo dejisan video online ah, iskaba daa abuuraan maktabad video karin. Si kastaba ha ahaatee, taasi ma dhammaadka wakhtiga dunidu ka hana ha kaa joojin inaad ka faaiidaysanayo galay video ururinta weyn in la heli karo in ka badan internet-ka.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa VIDEO Converter kama dambaysta ah in asal ahaan kaa caawin kara inaad ka adkaan DHAMAAN video ku duuban caqabado la eego qaab file incompatibility, nooca server iyo iwm
Ka sokow awood u leh inay taageeraan ku dhowaad qaab kasta oo file video, Video Ultimate ka Converter sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo ka videos soo bixi qaab kasta oo file aad u baahan doontid loo maqli karo, si loo waafajiyo xulasho Qalabka telefoonada gacanta , ama xitaa la wadaago . Waxaa intaa dheer in, kuwaasoo ah idinka ee uu gubi karaa DVDs mar walba oo aad jeceshahay wadaaga iyo sidoo kale wax ka bedel videos for taabasho ah ka hor inta aan la wadaago shaqsinimo rogtid oo aad goobaha bulshada sida Facebook, Twitter iyo kuwo kale.
In la barbardhigo ah video Converter online , Video Ultimate ka Converter waa in loogu badalo yaalla of videos isku mar halkii ay mid mid ay awoodaan. Waxa kale oo awood u leh diinta aad videos ilaa 30 jeer ka dhakhsi badan kasta oo kale video converters heli karo. Haddii aad illowday in aad cable USB, si fudud ku wareejiso ka soo bixi videos qalabka aad mobile wirelessly, iyadoo lagu eegayo xeerkii u yiilay QR ahbaa. Ha iloobin in aad baadhid ka badan boosaska badan ciyaartoyda video for qalab mobile, labada macruufka ama Android-ku-saleysan .
Ma ahan la yaab leh si ay u soo gaarto video files in aan lagala soo bixi karaa, xitaa marka aad leedahay oo dhan arrimo midig. Haddii taasi kiiska, si fudud u isticmaalaan taariikhqorihii Video in la dhisay-in la Video Ultimate ka Converter. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa nooca " Wondershare Video taariikhqorihii "sanduuqa raadinta ka bilaabatay menu aad PC ee ay, ka dibna riix natiijada ku kaliftay. Waxaana jiri doonta qooys oo cas oo soo on video aad tahay oo ku saabsan in Radidiyaha / arkaysid goobta internetka. Waxaa laga yaabaa inaad doonaa in guji REC button on geeska gacanta sarre bidix oo bilaabi doonaa in ay u Qoraynaa.
Sida loo Beddelaan Video inay Nexus 7
> Resource > Video > Download Online Video ah